Tirada dadka ku dhintay qaraxii Gaalkacyo oo gaartay ilaa 14 qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTirada dadka ku dhintay qaraxii Gaalkacyo oo gaartay ilaa 14 qof
December 19, 2020 Abdi Omar Bile Somalia 0
Kooxda gurmadka deg deg ah oo caawineysa dadka ku dhaawacmay qarax ka dhacay Muqdisho. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Tirada dadka ku dhintay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa gaartay ilaa 14 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Weerarka ayaa Jimcadii ka dhacay albaabka laga galo garoon kubadeed oo kuyaala koonfurta magaalada Gaalkacyo halkaas oo qorshuhu ahaa in Raysulwsaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu dadka deegaanka kula hadlo.
Dadka ku dhintay qaraxa ayaa waxaa ku jira dad shacab ah, duqii hore ee Puntland ee Gaalkacyo iyo saraakiil sare oo ciidan oo uu kamidyahay taliyihii qeybta 21-aad ee ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in naftiis halige katirsan uu qaaday weerarka si uu u bartilmaameedsado Raysulwasaaraha, sida ay baahiyeen warbaahinta ku hadasha afka maleeshiyada.
Puntland oo daawooyin iyo dhaqaatiir caafimaad geysay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Puntland ayaa daawooyin iyo dhaqaatiir caafimaad maanta oo Arbaco ah geysay magaalada Muqdisho si looga qeyb qaato gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho. Afartan oo daawo ah iyo toban qof oo isugu jira [...]
Qaramada Midoobay oo sheegtay in colaadaha Gaalkacyo ay ku barakaceen dad ka badan 75,000
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) In ka badan 75,000 oo qof ayaa ka cararay guryahooda intii lagu guda jiray saddexdii asbuuc ee ay socdeen dagaalada Gaalkacyo ee u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug. “Dagaalka waxa uu ka [...]